Tilmaamaha sida loo rakibo nooca beta ee barnaamijka moobiilka vfxAlert | vfxAlert official blog
Sida loo rakibo barnaamijka mobilada vfxAlert ee casriga ah ee wata Android OS
Signal adeegga vfxAlert waa kaaliyaha universal si aad ganacsiga. Dhammaan qalabka lagama maarmaanka u ah falanqaynta suuqa iyo saadaasha saxda ah waxay ku jiraan hal daaqad oo ay la socdaan dallaalku.
Dhammaan shaqeynta barnaamijka vfxAlert wuxuu ku yaal taleefankaaga casriga ah hadda: calaamadaha, awoodda calaamadaha, khariidadaha kuleylka, tilmaamayaasha ganacsiga, jaantusyada internetka, iyo isbeddellada.
Eeg tilmaamaha fiidiyowga ee ku saabsan sida loo rakibo arjiga moobiilka ee vfxAlert
Raac tilmaamaha fudud ee lagu rakibo barnaamijka mobilada vfxAlert ee casriga ah ee leh 'Android OS' :
1. Raac xiriirka https://vfxalert.com/mobile
2. Bogga ka hel astaanta "Soo Degso" oo guji.
3. Haddii nidaamkaagu muujiyo feejignaanta "Amniga, taleefankaaga ayaa loo qoondeeyay inuu xannibo rakibidda barnaamijyada laga helay ilo aan la aqoon", ka dhex hel setinka sheyga "Ku rakib barnaamijyada laga helo ilaha dibadda" oo guji "Enable".
4. Marka hore xaqiiji soo dejinta adigoo gujinaya soo dejinta astaanta.
5. Ka dib markaad ku rakibto arjiga taleefanka gacanta, gasho si aad u bilowdo ganacsiga.
Haddii aad ka akhriso tilmaamaha kombuyuutarkaaga, waxaad fursad u leedahay inaad ku soo dejiso arjiga lambarka QR .
1. Raac xiriirka https://vfxalert.com/mobile .
2. Raadi lambarka QR. Ka baari kumbuyuutarka kumbiyuutar codsi gaar ah oo moobiil ah oo akhriya lambarka QR.
3. Si aad u bilawdo ganacsiga xaqiijiso soo dejinta oo gasho.
Hadda waxaad ka sameyn kartaa xirfadaha ku jira is-dhexgalka caanka ah taleefankaaga gacanta meel kasta oo adduunka ka mid ah.